Fantatrao ve: Inona no atao hoe MoU - Memorandum of Understanding
lundi, 17 février 2020 09:51
Matetika retsika tatoato fa nisy fifanarahana nosoniavin'ny fanjakana tamina orinasa tsy miankina momba ny fampiasam-bola, ohatra amin'izany ny resaka fampindramana tany ny Arabo ampiasa ny tanin'ny Bas Mangoky 60 000ha, teo ihany koa ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, na ny fanamboarana barazy lehibe hamokarana herinaratra, na ny fanaovana carte de payement biométrique andoavana karaman'ny mpiasam-panjakana, anomezana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra..
Retsika amin'izany ny hoe natao sonia ny MoU.
Ny MoU - Memorandum of Understanding - Mémorandum d'entente - Protocole d'entente (PE) dia fifanarahana savaranonando ataon'ny olona roa na maromaro, na fanjakana sy orinasa iray.
Tsy mbola contrat définitif, na fifanarahana tsy azo ivalozana izany izy io, fa mbola filazalazana ny tian'ny andaniny sy ankilany atao. Matetika izy io dia, na ny fanjakana no manao antso amin'ny mpandraharaha izay fikasana tiany atao, ka mamaly ny orinasa izay mety liana amin'izany. Io ilay antsoina hoe "appel à manifestation d’intérêt", izany hoe tsy mbola "Appel d'offre", ka hoe efa vonona ao ny vola, fa mbola filazana hoe manana tetikasa toy izao izahay, ka iza no manam-pikasana amin'izany.
Etsy ankilany, dia misy indray orinasa manolotra tetikasa amin'ny fanjakana, milaza ny fahavononany hiasa amin'ny sehatra iray. Matetika io MoU io, dia na ilay orinasa manao sonia aminy dia mbola tsy manam-bola anaovana ilay asa, fa ny MoU dia antoka iray atolony ny Banky any aminy, na anaovany fanangonam-bola amin'ny tsenam-bola na Bourse, na hifampiraharahany amina mpanam-bola hafa. Mety tsy mpisehatra amin'ilay asa izy izany, fa mpanera ara-bola ihany.
Fariparitana ao anatin'io MoU io izany ireo asa atao, ireo fepetra, ny tombony ho an'ny andaniny sy ankilany miaraka amin'ny fepetra apetraky ny andaniny sy ankilany.
Tsy mbola mamatotra izany ny MoU, fa afaka miala ny andaniny na ny ankilany raha tsy tanteraka izay nangatahana, na tsy nahita vola ilay mpandraharaha.
Matetika dia mety ahodin'ilay orinasa manao MoU ilay fifanarahana anangonany vola any amin'ny Bourse, nefa avy eo tsy ataony ilay tetikasa ary izy tsy hita avy eo.
Ny MoU matetika dia mametraka ny fepetra tsiambaratelo sy tsy hisian'ny mpifaninana (Clause de confidentialité et de non concurrence) ao anatiny. Ny antony dia vao hitady lalana ilay orinasa, ka raha fantatry ny mpifaninana aminy dia mety hisy hibahana na hisavika ilay tetikasa.
Tandreman'ny Firenena mikambana anefa izy io sao misy ny diplomatie secrète.
Manankery eo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ve ny MoU?
Araka ny voalaza etsy ambony dia tsy mamatotra na ny andaniny na ny ankilany ny MoU, fa taridalana ihany (Lettre d'intention). Tsy manana force exécutoire, na manan-kery hanerena ny andaniny na ny ankilany amin'ny fifanarahana.
Rehefa samy vonona kosa ny roa tonta, izay vao avadika Contrat ny MoU, na ho Traité.
Matetika ireo mpandraharaha mampiasa ny MoU dia mangataka "Garantie souveraine de l'Etat" rehefa tena atao contrat, izany hoe manao taratasy fanekena ny Banky Foibe, fa tafiditra amin'ny fifanarahana hiantohan'ny fanjakana toy ny trosa ny fampiasam-bola ataony, ka raha misy ny fahavoazana, na fiovan'ny mpitondra, dia tsy azo ivalozana ny fifanarahana sy ny famerenam-bola.